Agasti - kanye leso sikhathi lapho ehlobo esigodini sakithi uyeza isiphelo sako okunengqondo. Wonke umuntu ngalesi sikhathi ufuna ukuya ezinye ekhoneni enhle kakhulu kule planethi yethu, ukuthi iholide akubanga yize, ukuthi wagcwala nakho ezintsha, injabulo, ilanga nolwandle ohelezayo efudumele, futhi mhlawumbe ngisho yangempela inganekwane. Uyini iholidi beach ngo-Agasti, lapho kungcono ubambe ekhoneni iplanethi the ningi ukuvakashela ngalesi sikhathi? Ake sicabangele izimpendulo zemibuzo zokungcebeleka edume kunazo European, eziqala epholile kuqhathaniswa futhi kokuqeda ngempela ashisayo.
Umlando, ezikhangayo futhi elinamanzi amaningi nenala ulwandle efudumele zezwe lasendulo
Ngo isilinganiso sethu kuyoba yizwe lokuqala ukuba Greece. Ibhishi iholide ngo-August lapha enhle ikakhulukazi ngoba efudumele zonke ngalesi sikhathi. Sea sekuqala ukufudumala kuya 25-28 degrees, izinga lokushisa 32, bese zonke degrees 35. Nokho, ukushisa kwehlobo zokukhanya - akulona ukukhangwa esemqoka yalolu amagumbi omhlaba. Izwe ingenye yezindawo ezicebe kakhulu emhlabeni emkhakheni nakumasiko. Ziningi onkulunkulu, amathempeli wasendulo, i-Acropolis, parfeony nobuhle ngendlela ekhexisayo imisele yamanzi nezindawo eziyisikhumbuzo. Ungakwazi achitha usuku lonke ukuhlola zonke lezi izakhiwo, ezakhiwe kanye okhokho bethu, futhi mhlawumbe uthole okuningi noma yini entsha. Yiqiniso, iholide beach in Greece ngo-August, ngeke akwenze ngaphandle lomoya nolwandle umoya. Zonke amabhishi ukuthi Ulapha Ubonakala uhlanzekile kakhulu futhi igcinwe kahle. Phakathi kwabo kungatholakala ngokuthi idolobha ezinomsindo, ne disco eminingi nezindawo zokudlela ezinhle, futhi ngempela zasendle, lapho, ngaphandle kwakho, ngeke zisaba khona umphefumulo owodwa.
Izwe, okuyinto wageza ngu kwezilwandle ezinhlanu
Yiqiniso, kunzima kakhulu ukuyeka uhambo kuleli zwe emangalisayo like Italy. Ibhishi iholide ngo-August lapha enhle ikakhulukazi ngoba, njengoba kwezinye ezingxenyeni eziningi zeYurophu, lena inyanga yakhe ezishisa. lokushisa ngamunye kolwandle, okuyinto ugeza ogwini ezweni, mayelana efanayo - kuze kube degrees 30, futhi izinga lokushisa emoyeni ngokuvamile idlula uphawu 35. Nomlayezo Wokufundisa Ngokuvakasha Italy ehlobo, ungathola lapha konke. Lapha, ubuhle emangalisa bemvelo. Ugu nezwi bacwiliswa zasemazweni, bese uya lé olungenamkhawulo, okuyinto uya eduze kolwandle. nezakhiwo eziningana yezakhiwo bobudala obungefani, ubuciko, imidwebo nomculo, ukuyothenga, Spas nobungqabavu izikhungo nokunye okuningi.
I zokungcebeleka eyinhloko Italy kwezilwandle ezahlukene
izivakashi eziningi Russian ukuchitha iholide lolwandle ngo-August ungaphakathi Liguria. Lena ingxenye encane kodwa olunothile kakhulu e-Italy, okuyinto itholakala ogwini Sea Ligurian, eduze komngcele waseFrance. Ngenxa yokuthi lapha uhlaza kakhulu ogwini kunensada coves ethokomele, okuyinto emnandi ikakhulukazi ukubhukuda futhi ujabulele ukubukwa phezu komkhathi engapheli yamanzi. Hhayi ngaphansi ethandwa Tuscany. Kuyinto ipharadesi ehlanganisa ezihlabayo coniferous, amabhishi segolide ifa olunzulu kwezamasiko. Zonke ogwini lapha zigcwele amahhotela eminingi, Villas nokuzijabulisa izakhiwo, lapho wonke umuntu kungaba uzithola amadlangala ngoba umphefumulo. Kodwa ogwini lwase-Adriatic Sea resort ezidumile Lido di Jesolo. Kuleli qophelo okufunwa kakhulu amabhishi eside segolide, blue sea ecacile, kanye nenamba enkulu kuma-nightclub.
Ungathanda okhela off - ukuya emzini isiginci dance!
amadlingozi ngempela futhi kumnandi kakhulu uhambo lwakho ezweni ngokuthi Spain. Ibhishi amaholide ngo-August kukhona ethandwa kakhulu sezulu layo afudumele bese ukuthutheleka enkulu yizivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Yiqiniso, Spain yilona lizwe nge ifa elikhulu amasiko, kodwa ambalwa Le nyanga yaziwa ngokushisa ngonyaka uthunyelwa lapha ukuze ubone izinto. Amafa main ubhekwa emabhishi egolide yokwelula eduze strip Mediterranean, ekuqaleni ziphethe Barcelona Cádiz. Kukhona amadolobha amakhulu resort - Barcelona, ukuzijabulisa yayo eminingi, Valencia, Malaga, - lapho ungathola ihhotela ukuze ivumelane zonke ukunambitheka kanye esikhwameni kungathiwani ngokuphila ebusuku. Phakathi kwabo kukhona idolobha elincane kancane, izigodi okudotshwa wangaphambili, lapho lonke ethulile futhi kukalwa, Luhle imindeni emikhulu nezingane.
Northern Spain Ezokungcebeleka
Kodwa futhi ukahle ezipholile, kodwa namanje ngempela efudumele isimo sezulu esifundeni Asturias. Zonke labo abakhetha amanzi saseMelitha Atlantic Gulf wathumela lapho. Kuyaphawuleka ukuthi ebhishi iholide kukhona ehluke ngokuphelele, ngokuyisisekelo ukuhluka zonke zokungcebeleka evamile. Asturian sandy izigodi ukuthi yokwelula eduze bay, ububanzi futhi eyihlane. Lapha ungakwazi ukuhlangabezana ubuhle emangalisa bokuphuma nokushona kwelanga ukuba ahambe. Futhi kule ndawo lenqwaba amatheku. Kulezi olwandle ezolile futhi esobala, ukuthi izingane uyoba ipharadesi langempela. Kodwa, naphezu obuthule ifa yemvelo, Asturias - kakhulu athuthukile esifundeni. Ukuthenga, zokudlela kanye nightlife lapha uqiniseka ukujabulisa.
Amazwe lapho kukhona njalo ukushisa futhi kumnandi
Yiqiniso, okungcono lolwandle iholide ngo-August uzobe elinde zonke izivakashi e-Latin America. Le ndawo idume ukuntula kwayo umehluko phakathi ihlobo nobusika. Wenza okuhlukile kungenzeka kuphela Cuba, lapho enyangeni edlule zasehlobo njalo kwemvula ulwandle nesivunguvungu kwakunjani eziqine. Isixazululo ephumelela kunazo kungaba ukushiya eMexico. Lapha, kwi Peninsula Yucatán, lenqwaba amabhishi eside, embozwe isihlabathi esihle emhlophe. Enhlonhlweni kukhona kokubili ifakwe ukuzilibazisa endaweni sunbeds eziningi futhi zasendle. Kude imizi kungatholakala amatheku amahle, lapho amanzi lifudumeza kuze kufinyelele ezingeni lokushisa eliphezulu kakhulu. Ukushisa kwasehlobo idluliswe sibonga kalula kuya zasemazweni ezinkulu ezishisayo, okuyinto liphuma amahlozi salo esifanele emanzini zaseCaribbean.
I-Ningizimu Melika kanye nezici zayo
Uma ehlobo ungayi eMelika Ephakathi naseNingizimu Melika, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi ubusika manje lapha. Emazweni iseduze kwenkabazwe, hhayi abandayo, futhi kushisa kakhulu, kepha ulwandle kungaba kancane liphansi kakhulu. Iqiniso liwukuthi phakathi ehlobo ogwini Pacific (Ecuador, Colombia, Peru) bavame ukuya amagagasi okusezingeni eliphezulu ngenxa imimoya enamandla, ngakho ukugeza evamile emanzini afudumele ezinye kungenzeka zingenzeki. Uma ungumuntu fan of windsurfing ke wenze indlela yakho kule ndawo emhlabeni. Lapha uzokwazi Uziphahlaze off esanele amagagasi, ukuthuthukisa amakhono abo futhi uthole okuningi nakho ezintsha kusukela iholidi.
Ibhishi amaholide ngo-August - kungenzeka ukuthi inkinga okungenani zonke izivakashi. Inyanga ehlobo, ashisayo cishe kuwo wonke amagumbi zezwe lethu. Ngakho kungakhathaliseki ukuthi uyaphi, cishe yonke indawo uzothola kolwandle efudumele, esihlabathini hot, futhi okuningi. Ngisho Russia zokungcebeleka ngalesi sikhathi abadumile ukushisa engacabangeki nokukhanya ulwandle umoya. Ngakho olukhethayo cruise yakho izwe ukuthi iningi edonsela nawe amasiko alo, lapho uyayijabulela "ukukhanya" noma nje ukuchitha izinsuku uzithulele, ukuthenga amathikithi akho kule isiqondiso. Futhi ungakhohlwa ukuletha emuva kusuka iholide kuyinto izithombe amahle, kodwa futhi injabulo yabo, okuzoba zonke onyakeni okwalandela ukukhulisa umoya wakho hhayi kuphela.
"Hamba" ifilimu ukubuyekezwa. Abadlali of the ifilimu "Hamba"
Honda CB 500: ukubuyekeza, TTX, ukubuyekezwa
OPEC amazwe - bomashiqela amanani emhlabeni